လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်များသို့ရှာဖွေခြင်းအသစ်များ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
နယူးရှာဖွေခြင်းလိင် (2012) အကြောင်းမေးခွန်းထင်မြင်ယူဆထဲသို့တောင်းဆို
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, မဟုတ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်ဗီဇ, တစ်ဦးချင်းစီဆုလာဘ်-circuit ကိုဝါယာကြိုးအားပြုပြင်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကအပျော်အပါးစင်တာနဲ့သူလမ်းညွှန်တဲ့အမူအကျင့်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇတွေထက်မဟုတ်ဘဲဘဝအတွေ့အကြုံများဖြင့်ထုဆစ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ယခင် dopamine လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရိုးရှင်းစွာအမွေဆက်ခံနိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ —Paul Stokes, MD, Ph.D
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်စင်တာ (သို့မဟုတ် circuitry) အဓိကအားအတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်ပုံဖော်နေသည်။ သံသယအများကြီးကြာမြင့်စွာကျင်းပယူဆချက်၌ဤထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက်သောနေရာများ: စွဲအကြီးအကျယ်အမွေဆက်ခံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာကျောက်တည် ထား. , အတွေ့အကြုံများကဒီရှေးဟောင်း circuit ကိုအပေါ်နည်းနည်းသက်ရောက်မှုရှိနေကြသည်။
နီးပါးအပတ်စဉ်, သုတေသနလူ့ဦးနှောက်၏ကြီးမားတဲ့ neuroplasticity ဖော်ပြသည်။ သို့သော်အများဆုံးကြိုတင်လေ့လာမှုများမှထောက်ပြ အဆိုပါအလိုက်အထိုက်နေတတ် အဆိုပါ, ပိုကြီးတဲ့ပိုပြီးအပေါ်ယံ၏ ဦးနှောက် cortex။ (အဆိုပါပိုမိုနက်ရှိုင်း, စရိုက်limbic) ဦးနှောက်ရိုးရှင်းစွာပိုမိုမြင့်မား cortex ကနေစေလွှတ် Impulses သတင်းပို့ဖို့တုန့်ပြန်တဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် holdover အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။
သာစွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် highlight လုပ်ထားတဲ့ မျိုးစုံ neuroplastic အပြောင်းအလဲများ စွဲလမ်း၏ဆုလာဘ် circuit ကို ... ပေါ်ပေါက်သော။ သို့သော်သူတို့ကရောဂါဗေဒဖြစ်စဉ်ကိုဒီဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုယူဆသည်။ အခုတော့ဒါဟာစွဲမျှသာကြောင်းပေါ်လာသည် neuroplasticity ၏အစွန်းရောက်အမှု။ အလားတူပလပ်စတစ်ယန္တရားများနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်းနေ့ရက်ကို-to-နေ့ကအတွေ့အကြုံကို-အထူးသဖြင့်နေဖြင့်ခြစ်ရာမပေါ်နေကြသည်။
လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းရန်အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပါမောက္ခ Paul Stokes ဦး ဆောင်သော UK အဖွဲ့သည် Ph.D ကို အသုံးပြု၍ လူ့ dopamine စနစ်ကိုလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ပါးနဒီဇိုင်းအမွှာလေ့လာမှု.
သုတေသီများသည် ဦး နှောက်ကိုခွဲ dopamine စနစ်များ function ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသုံးထပ်ဒေသများသို့:
(ADHD ်ပတ်သက်နေ) memory နဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functions များ,
လှုပ်ရှားမှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု (ပါကင်ဆန်ရောဂါကြောင့်ပျက်စီးသည့်စနစ်) နှင့်
ဆုလာဘ် (လှုံ့ဆျောမှု, စားချင်နဲ့စွဲမှဗဟို) ။
ငါတို့တွေဒီနောက်ဆုံးစနစ်အပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်မယ်၊ အကျိုးကို circuitryနှင့်မျိုးဗီဇကိုဘယ်လိုတစ်ဦးချင်းစီဝါယာကြိုးတက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်ကြောင်း limbic အဆောက်အဦများနှင့်အခြား, အရသာ၏ set ကိုတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်သောမျှော်လင့်မထားတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။
ထို့နောက်သုတေသီများအသုံးပြုသော PET Scan ဖတ် အမွှာသုံးခုစလုံးဒေသများရှိကြ၏ဘယ်လိုဆင်တူသို့မဟုတ်မတူညီတဲ့တွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်အမွှာနှင့် (ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ) ခွာအမွှာအတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာရန်။ ဒါဟာလူ့ dopamine system ပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးအမွှာလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်? shared မိသားစုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေဆို dopamine system ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြီးမြတ်ဆုံးတြူ (ဆိုလိုသည်မှာ heritability) ကြွက်သားထိန်းချုပ်ထပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, အကျိုးကို function ကို-The စားချင်နဲ့စွဲ-ပြသအနည်းငယ်သာ heritability မောင်းတစ်ခု။
တနည်းအားဖြင့်ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuit ကိုပု striatum (ကြွက်သားကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်) ၏အခြားဝေမျှထက်ပိုပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ post-ကလေးဘဝ, တစ်ဦးချင်းဘဝအတှေ့အကွုံဗီဇနှင့်မိသားစုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလုပ်ပေးထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားချင်နှင့်စွဲလမ်းမှုကို ပို. ပုံသှငျး။
တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိစ္စနှင့်အမျှကောင်းမွန်သောဤသဘောမျိုးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အမင်းပလပ်စတစ်ဆုလာဘ် function ကိုအထူးသဖြင့်စဉ်အတွင်း, ဦးနှောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်စောစောစီးစီးလူကြီးအခါဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစနစ်က Overdrive ၌တည်ရှိ၏။ မျောက်တဦးတည်းကျား၏မြီးကောင်ပေါက်သို့မဟုတ်အခြား (မျိုးစိတ်ပေါ် မူတည်. ) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတပ်တွေပြောင်းပေးပါ။ အလားတူပင်လူသားများအစဉ်အလာကိုအခြားအမျိုးအနွယ်နှင့်အတူငယ်ရွယ်အိမ်ထောင်ဖက်ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သာ. ကွီးမွတျ plasticity အသစ်သောလူမျိုးစုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ More ဒေသခံအစားအစာများနှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းရန်လျှင်မြန်စွာ acclimate အဖြစ်အသစ်အမြိုးနှယျတန်ဖိုးထားအောင်မြင်မှုလိုက်စားသင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင် enabled ။
ဒါတောင်မှသစ်ကိုတွေ့ရှိချက်မျိုးရိုးဗီဇအမွေဥစ္စာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆခဲ့ကြသောသုတေသီများ, အံ့အားသင့်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်လည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းလိင်ဆုချီးတွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သတိရှိရှိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူကြီးစဉ်အတွင်းပုံသွင်းမရနိုငျသောပေါ်ပြူလာယူဆချက်တတ်၏။
သို့သော်အသစ်ကတွေ့ရှိချက်သုတေသီများ၏မကြာသေးမီအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် ဂျိမ်း G. အ Pfaus, အကြိုးအတွေ့အကြုံများလူ့လိင်အခြေအနေနိုင်သည်ကိုအကြံပြုတဲ့သူ။ Pfaus ထောက်ပြအဖြစ်နို့တိုက်သတ္တဝါများမိတ်လိုက်ရန်သက်ဆိုင်ရာအသစ်အခွအေနမြေားလိုက်လျောညီထွေနေဖြင့်၎င်းတို့၏မျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အဘို့, ကောင်းသည်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘောမျိုးလုပ်လိမ့်မယ်။
မြင်ကွင်းကဤအချက်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်လက်ရှိသုတေသီများလူမှာဦးနှောက်၏အကျိုးကို function ကိုတစ်ခုပြီးသားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်စောငျ့ရှောကျ လူမှုရေးအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့,
"မျောက်ဝံများတွင်, striatal dopaminergic function ကိုလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, လူသားများတွင် striatal dopaminergic function ကိုလူမှုရေးအဆင့်အတန်းနှင့်ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ "
တနည်းအားဖြင့်သင်သည်သို့ထိုးလျှင် alpha အထီး၏အခန်းကဏ္ဍကို, သင့်ဦးနှောက်က၎င်း၏အကောင်းဆုံးသင်သည်သင်၏ (မိမိတို့၏) အခွင့်အလမ်းအများဆုံးလုပ်တက်ပစ်ခတ်ရပါဘူး!
အဆိုပါသုတေသီများကိုလည်းလေ့လာမှုအသစ်ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့် schizophrenia အဖြစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေတာကိုနားလည်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ စွဲထူးထူးခြားခြားဌနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ow dopamine အချက်ပြ အကျိုးကို circuitry အတွက် schizophrenia နှင့်အတူ အလွန်အကျွံ dopamine အချက်ပြ။ လူတစ် ဦး သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအပေါ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သည်ကိုအမွေခံရနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုအမွေဆက်ခံသူအားလုံးသည်ရောဂါဗေဒသို့ကျရောက်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။
ဒီတွေ့ရှိချက်လည်းအားနည်းချက်၏ပြတင်းပေါက်ထောက်ပြပါသလား? ဒါကြောင့်အချို့အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်အတွေ့အကြုံများ, ဤပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်းမျှော်လင့်မထားသောလမ်းညွန်အတွက်ဆုလာဘ် circuit ကိုတက် Wired စေခြင်းငှါဆိုလိုပါသလား?
သုတေသီပေါလ်စတော့ကရှင်းပြသည်မှာဆုအစီအစဉ်သည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်သည် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလူကြီးဘဝတစ်နည်းနည်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်အတွေ့အကြုံများ,။ " (အလေးပေးထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်) ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွမ်းကျင်သူထင်သည်ထက်ဆုပေးတိုက်နယ်သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပုံသွင်းရာ၌ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်သည်။ တနည်းကား, အစောပိုင်းသုတေသနက cortex မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာကြီးမားတဲ့ rewiring ခံယူကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Stokes ၏သုတေသနပြုချက်အရ ဦး နှောက်တွင်းနက်ရှိုင်းသောဆုလာဘ်လိုင်းသည်အလားတူဖြစ်သည်။
အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည် superlearning နေတဲ့အချိန် ဦးနှောက်ကိုအသစ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်လျှင်မြန်စွာအသုံးမပြုတဲ့အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကို (တံစဉ်များကိုသူ့ဟာသူ) discard လုပ်အဖြစ်။ ဒြပ်, supernormal ဆွအခမဲ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဒီပုံမှန်အား tribemates မှဆင်းပေးအပ်ဖို့အရေးကွီးဘဝကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအတွက်ရလဒ်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော်မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာတွင်မူဤအရှိန်မြှင့်သော rewiring ကာလသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အားနည်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ကလေးများသည်သူတို့၏ superlearning-window ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသော“ သင်ခန်းစာများ” တွင်အလွယ်တကူသုံးနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့် အာဟာရပါဝင်မှုနည်းပါးပြီးကိုလက်စထရောများသောအစားအစာ, မကြာခဏနည်းနည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလမ်းညွှန်မှု (သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတှေ့အကွုံ) နှင့်အတူ။ မိမိတို့အကျိုးကိုဆားကစ်အများကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်၎င်းတို့သည်နှောင်းပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါဟာသုတေသနမိုးသည်းထန်စွာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြု ကျနော်တို့သဘောပေါက်ထက် riskier-especially ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု highspeed ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်၏အကျိုးကို function ကိုဖြစ်ပါတယ် သဘာဝကျကျ Overdrive အတွက်နှင့်ထို့ထက် ပို. စွဲမှအားနည်းချက် (အပြောင်းအလဲမြန်, အကူအညီမရပါဝါယာကြိုး) ။ ယခုမှာကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ် circuit ကိုလည်းတစ်ဦးထက်ပို fixed မျိုးရိုးဗီဇအသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုမယ်လို့သောသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကင်းမဲ့ပုံရသည်။
ယခုအသစ်တွေ့ရှိချက် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ် circuitry ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်) ကြှနျုပျတို့၏အစောပိုင်းကရေးသားချက်များနှင့်အတူသေသပ်စွာလိုင်းများတက်, အထူးသဖြင့်:
1. Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
လက်ရှိသုတေသနပြုချက်အရ porn-related ED ရှိလူငယ်များသည်အသက်ကြီးသူများထံမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်အဘယ်ကြောင့်ပိုလိုအပ်သည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအထူးသဖြင့်ပလတ်စတစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာ pixel တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြတာပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်သူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလုံးဝရပ်တန့်ရန်လိုသည်၊ rewire အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ရန်။ သူတို့ကြိုတင် highspeed အင်တာနက်ကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်ဖို့ကြိုးကြောင့်အခိုက်မှာအဟောင်းတွေယောက်ျားတွေပိုမြန်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူများသည်အစောပိုင်းကဦးနှောက်ဆားကစ်အရပ်၌ရှိနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ အစဉ်အဆက်ဝတ္ထု porn များ၏ပြင်းထန်သောဆွမရှိတော့ယှဉ်ပြိုင်နေသည်သောအခါ, အစောပိုင်းကဆွဲဆောင်မှုပြန်လည်ရှင်သန်။
ဒါဟာသုတေသနမှာလည်းအဘယ်ကြောင့်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေသူကိုရှင်းပြဖို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင် ပြောဆိုချက်ကိုစွဲခံရဖို့မ ဆဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် (သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ပြီးနောက် abate) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုး။
2 ။ အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?
“ စွဲလမ်းသူအဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်း” သည်ပျံသန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများသည်မျိုးဗီဇများထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ပုံရသည်။ ညစ်ညမ်းအမြန်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များအပေါ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်၊
နှစ်ပေါင်းများစွာ, ကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ပြခဲ့ကြ ထဲမှာလွန်ကဲကြီးထွားမှု, rewiring နှင့်တံစဉ်များကိုရှိကွောငျး ဆယ်ကျော်သက် cortex။ ဒါပေမဲ့ဒီလေ့လာမှုအသစ်တစ်ဦးဆုလာဘ်အုပ်ချုပ်သောရှေးဟောင်း limbic အဆောက်အဦများအတွက်နက်ရှိုင်းသော rewiring သက်ဆိုင်ရာ၏ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ hyperplasticity ၏အခြားသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုက်ညီပါတယ်။ ဥပမာ, မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB မျိုးဗီဇအပေါ်လှည့် တုံ့ပြန်အတွက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် overconsumption of လှုံ့ဆော်မှုဆုချီး, ထို့ကြောင့် ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအတွက်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB သဘာဝကျကျမြင့်မား မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း, ဖြစ်ကောင်းမှ rewiring နှင့်သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြု။ ကလေးဘဝသင်ယူမှုပြီးသားရာအရပျကိုယူ, ဒါကြောင့်ဒီထားပါတယ် အထူးဆယ်ကျော်သက်ကာလ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအာရုံစိုက်ထားပါတယ်: မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုနှင့်လူကြီးများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်း။
ကျနော်တို့အသစ်သောတွေ့ရှိချက်ကိုလည်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းရှင်းပြဖို့ကူညီပေးသည်သံသယ မျှော်လင့်မထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမှတင်းမာမှုလျှော့ချ ဒါမကြာခဏဒီနေ့ avid highspeed porn aficionados အစီရင်ခံသည်။
သမိုင်းကိုဖြတ်ပြီး, ယဉ်ကျေးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းအာဖရိကမှာအမြိုးအနှယျရှိပါတယ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမနေပါနဲ့။ အသက်ကြီးများအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြိုတင်ယူထားကြောင်းအစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အမျိုးအနွယ်အားပေးကြောင်းအမြိုးအနှယျရှိပါတယ်။ မယားအမြားယူနှင့်မယားစိုးမိုးရေးသည်အဘယ်မှာရှိယဉ်ကျေးမှုကျင့်သုံးကြောင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားသူများရက်စက်စွာကြောင့်စစ်ကြောတော်မူစဉ်ဖောက်ပြန်မှာစှပွေခွငျးကြောင်းယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိလူသားများသည်မျိုးဆက်ပွားနည်းဗျူဟာများကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်ထူးခြားသောအခြေအနေများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပလပ်စတစ်ပမာဏများစွာလိုအပ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ငယ်ရွယ်သော ဦး နှောက်သည်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်မမြင်ဖူးသောအရာများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲချိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒဿနပညာရှင်အားလုံးသည်သူသည်ယခုကဲ့သို့လူမှစတင်ခြင်းနှင့်သူ့အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်သူတို့၏ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်သည်ဟုတွေးလေ့ရှိသည်။ သူတို့သည်“ လူ” ကိုအလိုလျောက်ထင်မြင်ယူဆတတ်ကြသည် aeterna veritasအရာအားလုံးကိုသေချာတိုင်းတာတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့၊ အလုံးစုံ flux အလယ်မှာအမြဲတည်နေတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့် ဦး နှောက်၏ဆုိုင်ရာကွင်းဆက်အားစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနေသည့်အရာသည်၎င်းကိုပုံသွင်းနိုင်ကြောင်းသိရှိရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ hardwired ရှိနေပါတယ် ချက်နဲ့ဖြစ်- အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင်စိတ်ကူးတာကအန္တရာယ်များပါတယ်။